u-Van der Dussen ukulindele ukuhlola okusha kwi-"Proteas way"
Thu, 03rd September 2020
PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA - JANUARY 18: Rassie van der Dussen during the South African national cricket team training session and press conference at St Georges Park on January 18, 2019 in Port Elizabeth, South Africa. (Photo by Richard Huggard/Gallo Images)
Oshaya kuma-Proteas u-Rassie van der Dussen ukulindele ukubuya kwekhilikiti yamazwe lapho iqembu lizophinde lihlangane futhi liqhubeke nokwakha isikhonkwana esikhona njengoba kuhlanganiswe usiko labo olusha.
Kwiqembu elinwetshiwe labadlali abawu-32, iqembu le-High Performance okubalwa khona abadlali bama-Proteas abadlala njalo kwiqembu lesizwe knaye neqembu le-South Africa A, kanye nabadlali abakhonjelwa amacebo eminyaka ezayo, baqede ikhempu yosiko yeqembu lesizwe okokuqala eminyakeni ewu-10 ngesonto elidlule lapho abavumelana khona ngendlela entsha eyaphambili, ne-values system ethuthukile ephethe inhlonipho, uzwelo kanye nokuqondana njengezinsika zabo.
“Umuzwa obukhona ubumuhle,” u-Van der Dussen ephawula kulelisonto. “Ukube nezinyanga ezimbalwa kungasetshenzwa futhi nesikhathi sokucabangisisa emuva kwama-series okugcina sidlala ne-England ne-Australia bekukuhle ukuhlangana nawonke umuntu kabusha futhi bekukuhle ukuxoxa ngendlela entsha eyaphambili futhi nokujula kwezinye izihloko bekudingeka kakhulu ngalesikhathi.”
“Ukudlala kwaxoxwa kabanzi ngakho. Ngijabule kakhulu ngalokhu okusilindile phambili njengeqembu lama-Proteas. Sithole okujwayelekile okukhuthazayo futhi ngikulindele ukuqala futhi nokusebenzisa lokhu kanye nokukuphila nokuqala nokuhlela izinhlelo zomdlalo kanye nokuguqula indlela ama-Proteas azobe edlala ngayo nendlela azobe ebonwa ngayo kuyela phambili.”
“Kwakunezihloko ezinzima ezakhulunywa kwikhempu,” esho eqhubeka. “Kumele kunconywe i-CSA, abaqeqeshi kanye nabaphathi ngokwakha inkundla kanye nesimo lapho wonke umuntu engazizwa ephephile futhi akwazi ukuxoxa izindaba kanye nokuletha ukukhanya kwizinkinga ezazisezinhliziweni zawonke umuntu.”
“Kwangijabulisa ukuzimisela kweqembu ukuba nezinxoxo ezivulekile, kubalulekile ukuthi abantu okokuqala, bazwane – kuphunywa ezindaweni ezahlukene, usiko oluhlukene, izinhlanga ezihlukene kanye nezinkolo – kwisizwe esihlukene njengesethu.”
“Kubalulekile ukuvula umgqondo wakho futhi uyibone kabanzi yonke into ebalulekile kuwona wonke umuntu ngaphambi kokuthi uzimele lapho obeka khona labo bantu. Kwakukuhle ukubona ukuthi wonke umuntu wazizwa ekhululekile nokuthi saba nenkundla lapho wonke umuntu angabaneqiniso kwabanye ngaphandle kokuhlulelwa.”
Esisodwa isihloko kulezi ebezigqamile ezinxoxweni kube inguquko kanye nezipiliyoni ezahlukene zabadlali abaphuma ezindaweni ezahlukene. Inhloso kwaba ukwakha isimo lapho ukuqonda kanye nokuzwelana kuzohamba phambili ngomphumela wokuthi abadlali bayazibonela ukuthi abanye badlule kwisimo esinjani.
“Kubaluleke kakhulu ukuba nalezinxoxo ezihambisana nohlanga, umlando wesizwe kanye nenguquko. ENingizimu Afrika, awukwazi ukwenza sengathi awuwazi umlando futhi ngokwami, kucishe kube sengathi kunenkungu phambi kwakho uma ungayi ukuyobheka umlando wesizwe sethu – lokhu okuhle kanye nalokhu okubi,” kuchaza lomdlali oneminyaka ewu-31. “Uma sifika endaweni lapho umuntu engaphawula ebe enolwazi futhi ufundile ngalezici, abantu bangafika endaweni lapho kuzoba nozwelo oluningi, ukuqonda kanye nendlela eyaphambili izokhanya kakhulu.”
u-Van der Dussen uchaze ngezinsika ezintathu ze-values system kanye nezizathu zokuthi yini iqembu likhethe zona. Uthe:
“Inhlonipho, uzwelo kanye nokwamukeleka izinsika ze-values system ebekiwe. Inhlonipho yeqembu lakho, uwena, isimo okusona, abantu ohlangana nabo, abantu abakugadile, abantu abakusekile, abalandeli bethu, umuntu osemgwaqeni kanye nokuphila ngendlela yama-Proteas izinsuku zakho zonke zempilo, kukho konke okwenzayo. Ukuncika kulelozinga njenxusa lesizwe sethu kanye nenxusa lebheji lama-Proteas.”
“Uzwelo, ukuqonda. Njengoba bengike ngasho, kubalulekile kuwona wonke umuntu ukuthi aqonde isizwe sethu, aqonde ukuthi kwenzakalani okwamanje kwisizwe sethu, aqonde inkathi edlule nayonke into eyenzeka. Aqonde amasiko ahlukile, izinkolo, izinhlanga futhi aqonde izindaba ezahlukene eziqhamuka kubantu abahlukene nabadlali futhi abone ukuthi akusho lutho ukuthi uluphi uhlanga, uluphi usiko noma inkolo, udaba lwakho lusangahluka kunomunye umuntu kanye nesizathu akholwa kwezinye izinto futhi uphile impilo yakho ngendlela ethile. Sonke singumkhiqizo wesimo esakhulela kuso, futhi okubaluleke kakhulu ukuqonda futhi nokuhlonipha izindaba zabanye.”
“Ukwamukeleka ukwakha isimo lapho abantu bangafika futhi bazizwe bekhululekile kusukela ekuqaleni. Bangazizwa bekwisimo lapho bengakhuluma khona bakhululeke, bangaba ibona, lapho bengeke basabe khona ukukhuluma futhi basho abakucabangayo noma basho okubenza bakhululeke noma bangakhululeki. Ukwakha isimo lapho useqenjini, kodwa uzwa sengathi uyinxenye yomndeni noma ukude nasekhaya, uzwa sengathi unomndeni wakho futhi usekhaya. Ukwamukeleka kuyahambisana nokukhululeka futhi uma ukhululekile njengomuntu noma njengomdlali, yilapho kuphuma khona okuhle kuwena.”
"Sidinga ukunqoba imidlalo" - u-Ngidi Kungiqinisile ukulimala – u-Ngidi u-Verreynne ubonga akufunde kuma-Proteas u-De Kock uzoba ukapteni wama-Proteas weqembu lama-T20, kubuya u-Steyn kwabizwa u-Magala no-Van Biljon kuma-T20 Ukuma kweqembu lama-Proteas kuma-ODI Babizelwe i-Test yokugcina abadlali abadedelwa kuma-Proteas i-CSA imemezela iqembu elifanayo lama-Proteas kuma-Test asele kwi-series u-Petersen ubizwe okokuqala kuma-Proteas u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas u-Hamza uletha ukukhanya ekushayeni kwama-Proteas i-India inqobe i-series ngokunqoba nge-innings